Halkee iskala jaan qaadeen madaxweyne Farmaajo iyo Saciid Dani? – Somali Top News
Halkee iskala jaan qaadeen madaxweyne Farmaajo iyo Saciid Dani?
July 21, 2019 Somali Top News	0 Comments
Waxaa sii xoogeysanaya khilaafka u dhaxeeya dowladda Federalka iyo maamul goboleedka Puntland kadib markii dhowr jeer labada madaxweyne uu xumaaday xiriirkooda.
Khilaafka ayaa hadda isku badalay mid weerar afka ah iyadoo Puntland ay dhagaha ka fureysatay baaqyada dowladda Federalka ee maamul wanaaga iyo isla shaqeynta si danaha guud ee dalka loo wada gaaro.
Wixii ka dambeeyay shirkii madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda Federalka ku lahaayeen magaalada Garoowe ee sanadkan bilowgiisa fashilka ku dhamaaday, waxaa Saciid Dani maamulkiisa uu soo saaray war-saxafadeed ku qornaa af English oo uu ku sheegay inuu joojiyay wada shaqeyntii kala dhaxeysay dowladda Dhexe.
Dowladda Federalka kama jawaabin qoraalkaas, waxaana Saciid Dani uu ka daba keenay mid kale oo dowladda Soomaaliya uga digeysa iney faragalinta ka deyso doorashooyinka Galmudug iyo Jubbaland.
Warqadaas kama aysan hadlin dowladda hadana waxey soo saartay Puntland wareegto kale oo ay Ra’iusl Wasaare Kheyre isaga fogeyneyso kaa oo hadda ku sugan maamulka Galmudug markii uu tagayay magaalada Gaalkacayo iyagoo u diiday in dhanka Puntland uu soo galo.
Hadane Bishan July kaliya Saddex jeer ayey Puntland soo saartay war-saxaafadeed kuwaa oo si toos ay ugu soo hor jeesatay dowladda dhexe islamarkana u badnaa digniin.
Puntland ayaa sharci darro ku tilmaamtay Guddi uu madaxweyne Farmaajo u magaacaby wadahallada Somaliland iyo Dowladda Soomaaliya, waxeyna tilmaamtay ineysan dani ugu jirin Putland.
Sidoo kale Puntland ayaa si cad u diiday amar ka soo baxay madaxweyne Farmaajo oo ahaa in la sii daayo Guddiga wado dhisidda magaalada Boosaaso oo ku xiran Garoowe iyagoo sheegay in xitaa Farmaajo oo socda sii deyn Karin.
Maanta ugu dambeysay Puntland waxey digniintii ugu dambeysay siisay Dowladda Federalka waxeyna ku amartay iney faraha kala baxdo arrimaha maamul goboleedyada gaar ahaan doorashooyinka Jubbaland iyo Galmudug.
Halkey iska qabteen Farmaajo iyo Saciid Dani?
Puntland ayaa ka walaacsan awoodihii maamul goboleedyada oo sii wiiqmaya iyo ilihii dhaqaale oo dowladda Federalka isku koobtay, sidoo kale Farmaajo ayaa Saciid Dani si cad ugu sheegay inuusan ku farxin markii doorashada Puntland uu ku soo baxay, waxaana Saciid uu diiday inuu dowladda dhexe la shaqeeyo.
← Dibadbaxayo rabshado wata oo ka socda Somaliland
Puntland oo u digtay dowladda Federalka →
Saraakiil Shabaab Ah Oo Ciidamada Dowladda Isku Dhiibay
Ciidamada dowladda oo howlgallo ka bilaabay dagmada Afmadoow